Blogger များသိသင့်﻿စရာ (အပိုင်း၂) — Steemit
Blogger များသိသင့်﻿စရာ (အပိုင်း၂)
zwal (45) in myanmar •2years ago
မဖတ်﻿ရ﻿သေးရင်﻿ https://steemit.com/myanmar/@zwal/blogger-undefinedthithng-syaa အဲ့လlinkက﻿နေသွား﻿ရောက်﻿ဖတ်﻿ရူ့နိူင်﻿ပါတယ်﻿။
ခုဆက်﻿လက်﻿﻿ရေးသားမည့်﻿အ﻿ကြောင်းက﻿တော့ မြန်﻿မာ Blogger များ ဝင်﻿﻿ငွေတိုးပွား﻿စေရန်﻿ ရည်﻿ရွယ်﻿ပြီး သိသင်﻿စရာ﻿လေး﻿တွေကို မျှ﻿ဝေ﻿ပေးပါ့မယ်﻿။
ခု﻿နောက်﻿ပိုင်းမှာ Facebook နဲ့ Page﻿တွေမှာ လင့်﻿တင်﻿ခြင်းကို Facebook က မနှစ်﻿သက်﻿သလို ဖြစ်﻿လာပါပြီ..
အဓိက ပိုက်﻿ဆံရှာ﻿နေတဲ့ Pageမှာဆို အရမ်းသိသာပါတယ်﻿ အဲ့လိုPageမှာ မိမိWebsite linkတစ်﻿ခုခုတင်﻿ကြည့်﻿ပါ Reach သိပ်﻿﻿မ﻿ရောက်﻿ဘူး ﻿ပေ့မှာLikeလုပ်﻿ထားသူ﻿တွေကို 20% ﻿လောက်﻿သာ ပြပါတယ်﻿။ ဆိုလိုတာက မိမိတင်﻿လိုက်﻿တဲ့ Linkနဲ့ပိုစ့်﻿ကို လူမြင်﻿﻿တွေ့နိူင်﻿နှုန်းဟာ 80%﻿လောက်﻿ Facebook က﻿ရှော့ချထားလို့ပါ။
ဘာ﻿ကြောင့်﻿ဒီလို ဖြစ်﻿လာရသလဲ ဆိုရင်﻿ Facebook Instant Articles Future အသစ်﻿﻿ကြောင့်﻿လို့ ကျ﻿နော်﻿သုံးသပ်﻿မိပါတယ်﻿။ ၄င်းFutureကို Blogger များ (တစ်﻿နည်း) Publisher များကို သုံး﻿အောင်﻿ Facebook က တွန်း﻿နေနခြင်းဖြစ်﻿ပါတယ်﻿... ထိုFuture ကို ကျ﻿နော့်﻿အ﻿နေနဲ့ ﻿ကောင်းတယ်﻿ မ﻿ကောင်းဘူး ဆိုတာကို ကျ﻿နော်﻿ကိုယ်﻿တိုင်းစမ်းသပ်﻿﻿နေပါတယ်﻿ ။ လွန်﻿ခဲ့တဲ့ 2015﻿လောက်﻿ကထင်﻿တယ်﻿ ကျ﻿နော်﻿ Facebook Instant Articles Future အသစ်﻿﻿ကို စမ်းသပ်﻿ခဲ့ပါ﻿သေးတယ်﻿ အဲ့တုန်းက အခက်﻿အခဲကြီးကြီမားမားတစ်﻿ခု﻿ကြောင့်﻿ ကျ﻿နော်﻿ ဆက်﻿ပြီးမစမ်း﻿တော့ပဲ ပစ်﻿ထားလိုက်﻿ပါတယ်﻿။
ထိုအခက်﻿အခဲဆိုတာ ဘာလဲသိချင်﻿တယ်﻿ဟုတ်﻿? 😃
ပြောပြပါမယ်﻿ အဲ့ဒါက﻿တော့ မြန်﻿မာ﻿ဖောင့်﻿ပြသနာ ပါပဲ။
မြန်﻿မာလူမျိုး မြန်﻿မာစာနဲ့မတင်﻿လို့ ဘယ်﻿စာနဲ့သွားတင်﻿ရပါ့မလဲ? အဲ့ဒီ Facebook Instant Articles Future အသစ်﻿﻿မှာ မြန်﻿မာစာ လုံးဝ ﻿ထောက်﻿ပံ့﻿ပေးမထား။
အဲ့﻿တော့ ပြသနာတက်﻿ပီ﻿လေ.... ဘာလုပ်﻿ရမလဲ ပစ်﻿သာထားလိုက်﻿﻿တော့တယ်﻿... တစ်﻿ခြားနိူင်﻿ငံ﻿တွေ မှာ﻿တော့ Engish လိုဆို﻿တော့ အဆင်﻿﻿ပြေ﻿ပေမယ့်﻿ ကျ﻿နော်﻿တို့ မြန်﻿မာနိူင်﻿ငံမှာ﻿တော့ လုံးဝ အဆင်﻿မ﻿ပြေပါဘူး။
အခု2017﻿လောက်﻿မှာ﻿တော့ Facebook Instant Articles Future ဟာ မြန်﻿မာစာကို ﻿ထောက့်﻿ပံ့﻿ပေးလာပါပြီ.. ဒါ Blogger﻿တွေ Publisher ﻿တွေအတွက်﻿ သတင်း﻿ကောင်း တစ်﻿ခုပဲမဟုတ်﻿ပါလား....
ခုကျ﻿နော့်﻿အ﻿နေနဲ့ ခုလိုပြန်﻿လည်﻿ချပြ﻿ရေးသားဖို့ဆိုတာ ကိုယ်﻿တိုင်﻿ သိတက်﻿ကျွမ်းထားမှသာ ခုလိုပြန်﻿လည်﻿ချပြ﻿ပေးလို့ရမည်﻿မဟုတ်﻿ပါလား? သိသလိုလို မသိသလိုလိုနဲ့﻿တော့ ကျ﻿နော်﻿ဆရာကြီးမလုပ်﻿တက်﻿﻿ကြောင်းပါ 😃
ဒါ﻿ကြောင့်﻿အခု Facebook Instant Articles Future
Platform အသစ်﻿﻿ကြီး ကို သဲသဲမဲမဲစတင်﻿﻿လေ့လာ﻿နေပါပြီ.. Bloggerများတိုးတက်﻿﻿စေရန်﻿အတွက်﻿ ရည်﻿ရွယ်﻿ပါတယ်﻿။ Blogger ﻿တွေတိုးတက်﻿ရင်﻿ ဘာဖြစ်﻿မလဲ????
နည်းပညာBlogger က နည်းပညာ﻿တွေ ပုံမှန်﻿မျှ﻿ဝေလာမယ်﻿ စာအုပ်﻿စာ﻿ပေ Blogger﻿တွေက စာအုပ်﻿စာ﻿ပေ﻿လေး﻿တွေ ﻿ရေးတင်﻿လာကြမယ်﻿ ၊ သတင်း / ရသ / ဗဟုသုတ ဒါ﻿တွေ အင်﻿တာနက်﻿သုံးတိုင်း ﻿တွေ့မြင်﻿လာမယ်﻿ ﻿တစ်﻿ခုရှိတယ်﻿ ﻿ကောင်းတာကိုပဲ အတုယူပါ ။
ခု﻿ခေတ်﻿မှာ ဟိုပုံ သည်﻿ပုံ မမှန်﻿ကန်﻿တဲ့ သတင်း﻿တွေ လက်﻿ညိုးထိုးမလွဲဘူး ဒါကို Facebook ကသိတယ်﻿
Facebook Instant Articles Future
Platform မှာ ဒါ﻿တွေသွား﻿နောက်﻿လို့မရဘူး မရ﻿အောင်﻿လဲ ပိတ်﻿ပင်﻿တားမြစ်﻿ထားတယ်﻿ အရမ်း﻿ကောင်းတဲ့ အချက်﻿၁ချက်﻿ပါ။ လူငယ်﻿﻿တွေအတွက်﻿ အတုယူမမှားရ﻿အောင်﻿
ကဲ.. ဒီ﻿လောက်﻿ပါပဲဗျ လူလဲအရမ်းနားချင်﻿﻿နေပီ မအိပ်﻿တာ ၃ရက်﻿ရှိပြီ အိပ်﻿လဲ ခနရယ်﻿ ပြန်﻿နိုးနိုး﻿နေတယ်﻿။
ကွန်﻿ပြူတာနဲ့ ဖုန်း ဖုန်းနဲ့ကွန်﻿ပြူတာ Rရိုက်﻿﻿နေတယ်﻿ ဟိဟိ....
Post by @ZWAL
Photos Credit ; Google.com
myanmar blogger instant